सलमानका बडिगार्ड शेरा : जसको तलब सुनेर पर्नुहुनेछ चकित…
June 10, 2020 4905
शेराको वास्तविक नाम गुरमितत सिंह जोली हो । शेराको जन्म मुम्बई’को एक सिख परिवार’मा भएको थियो । शेराले सन् १९८७ मा मिस्टर मुम्बई जुनियर जितेका थिए । त्यसको अ’र्को वर्ष उनले मिस्टर महाराष्ट्र जुनियर प्रतियोगिता’मा भाग लिएका थिए ।
शेराको भेट सलमान खानसँग सन् १९९५ मा भएको थियो, त्यतिबेलादेखि उनी सलमानको छाया’जस्तै सधैं सँगै हुन्छन् । सलमान आफ्नो सुरक्षाका लागि शेरालाई वार्षिक २ करोड बढी रकम दिन्छन् । अर्थात्, शेराको मासिक तलब १६ लाख भारु’भन्दा बढी रहेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख गरिएको छ ।
शेराको आफ्नै एउटा सेक्यु’रिटी एजेन्सी छ जसले व्यापारी र सेलिब्रिटी’लाई सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । शेरा अब सलमान’को परिवारको सदस्यजस्तै भइसकेका छन् । उनले आफ्नो जीवन’को अन्त्यसम्मै आफू भाइसँग नै रहने बताएका छन् ।
Prevआज एकैदिनमा ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस्
Nextखाली पेटमा चिया पिउनुहुन्छ ? ल्याउन सक्छ यस्ता गम्भीर समस्या…
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको सुनको भाउ
भाईरल भयो अञ्जली अधिकारीको यो डाण्स स्टेप.. (भिडियो सहित) हेर्नु`होस्
प्रहरीसँग अटेर गरेपछि सेनानै यसरी उत्रियो सडकमा (हेर्नुहोस् भिडियो)
शुसान्तकी गर्लफ्रेन्ड रुँदै अस्पताल पुगिन् …हेर्नुहोस्….